Shiinaha saqafka biraha Shiinaha warshad sokorta qoraxda iyo alaableyda | Alicosolar
Iyada oo leh qaansooyin kala duwan oo saqafka kala duwan ah, Alicosolar steel steel alwaax saqafka qaadeysa ayaa la kulmi kara
trapezoid / saqafka biraha jiingado iyo dalabka saqafka tollayn dalab leh ama aan la dhex gelin
saqafyada. Alicosolar wuxuu leeyahay koox injineer heer sare ah iyo nidaam maamul tayo leh oo lagu bixiyo
adeeg kaamil ah.
Faahfaahinta qorraxda kor u qaadista qorraxda
xawaaraha dabaysha: <60m / s
Culeyska barafka: 1.4KN / m2
Heerka: AS 1170.2
Qorshaynta: Joogto ama Jaangooyo
Dammaanad: 25 sano
Buugga Rakibaadda (Fudud):
1.Fir L-cagaha adoo taabanaya fur, hubi biyuhu inay ku dhajiyaan saxanka caagga ah.
Ku rakibidda tareenka dhinac L-cagaha, godka L-fee ayaa hagaajin kara tareenka dheereeya
3.Laba biraha ayaa taageeray gole kastaa, ku hagaaji darfaha bartamaha isku haysa iyo xirmada dhamaadka haysa.
Qaybo Kala Duwan Oo Ku Xidhan Qorraxda
Daawaha aluminium ee marinka loo yaqaan 'Marine aluminium'; Qaybaha ugu muhiimsan ee looxaanta, Waxaa loo adeegsaday in lagu dhejiyo nalka qoraxda
Ku dheji tareenka hagaha saqafka, Ku xir si aad u hagto xadiidka, si sahlan loo rakibo
Isku haynta dhamaadka
hor-kulan; Go'an cirifka qorraxda
pre-shirkii; Loo adeegsaday hagaajinta iyo isku xidhka baalayaasha qoraxda
1) rakibid fudud
Qaybo waxay ahaayeen horumarsan ka hor warshad si loo badbaadiyo waqtiga rakibiddaada
2) Badbaadada iyo isku halaynta
Hubi tijaabinta qaabdhismeedka si adag oo ka soo horjeeda xaaladda cimilada daran
3) Jajabnaanta iyo hagaajinta
Naqshadeynta casriga ah waxay yareyneysaa dhibaatada rakibaadda xaalada ugu badan
4) Waxtarka sare iyo iska caabbinta dahaadhka
Dammaanad qaado nolosha adeegga sheyga
5) dammaanad 25 sano ah
Jingjiang Alicosolar tamarta cusub ee Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku jirta qaybta qorraxda PV ee ku takhasustay soosaarka qoraxda PV
tikniyoolajiyad casri ah iyo adeeg aad u wanaagsan., Waxaan leenahay warshad noo gaar ah.
Xubnaha AlicosolarSolar waxay naftooda u huraan cilmi baarista, qaabeynta, soo saaridda iyo iibinta joogtada, kalsoonida
iyo xallinta nidaamka xallinta nidaamka tamarta qorraxda ee 'PV'.
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah dhoofinta wax soo saarka qoraxda ee ugu weyn Shiinaha,
wax soo saarka Alicosolar waxaa lagu rakibay in ka badan 200 oo waddan iyo gobollo tan iyo markii la aasaasay.
Alicosolar waa soo saare nidaamka tamarta qoraxda oo leh qalab tijaabo oo qalabaysan iyo xoog farsamo oo xoogan. Waxay ku taal magaalada Jingjiang, 2 saacadood oo baabuur ah oo ka socota Madaarka Shanghai.
Alicosolar waxay soo saartay qalab wax soo saar otomaatig ah oo casri ah oo ka socda Jarmalka, Talyaaniga iyo Japan. Waxaan ku bixin karnaa adeeg hal-joog ah oo loogu talagalay naqshadeynta, wax soo saarka, iibka, iyo adeegga iibka kadib. Waxaan sugeynaa inaan si daacad ah aan kulashaqeyno.
Waxaa la aasaasay 2008, 500MW soosaarka wax soo saarka qoraxda, malaayiin batteri ah, koontaroole lacag bixin ah iyo awood soo saar bamka. Warshad dhab ah, warshad iib toos ah, qiimo jaban.
Naqshadeyn bilaash ah, Lahabeyn karo, gaarsiin deg deg ah, adeeg hal-joog ah iyo adeeg mas'uul ah iibka kadib.
In ka badan 15 sano oo khibrad ah, tikniyoolajiyadda Jarmalka, xakamaynta tayada adag, iyo xirxirida adag. Sii tilmaan hage fog, aamin ah oo xasilloon.
Alicosolar 5kw On-Roobka-qoraxda-nidaamka ugu su ...
Wave Sine Wave 1000W-10000W Off Grid Solar Inve ...
72 koronto qoraxda
Alicosolar Mono 144 unugyada unugyada qoraxda 515 ...